Ny sehatra Saudi Arabia no setriny! 1000+ saina manam-pahaizana hifindra amin'ny fironana vaovao ho an'ny fizahan-tany manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny sehatra Saudi Arabia no setriny! 1000+ saina manam-pahaizana hifindra amin'ny fironana vaovao ho an'ny fizahan-tany manerantany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fampiasam-bola amin'ny maha-olombelona, ​​ny hetsika ary ny valiny dia singa fototra napetraky ny minisitry ny fizahantany Saudi Arabia ho an'izao tontolo izao. Arabia Saodita dia nanasa 1000+ mpitarika fizahan-tany mamirapiratra sy manan-kery indrindra ho amin'ny Future Investment Initative ho avy ao KAICC any Riyadh, 26-28 Oktobra.
Ny Future of Initiative Investment dia miorina ao Riyadh miaraka amin'ireo birao any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao.
26-28 Oktobra, 2021 no hetsika fitsingerenan'ny faha-5 mitondra ny lohateny hoe "Invest in Humanity" at the Venue is the Ritz-Carlton Hotel ary ny King Abdulaziz International Conference Cente (KAICC) any Riyadh any Saudi Arabia
Ny Minisiteran'ny Fizahan-tany Arabia Saodita dia nanasa mpitarika mpizahatany miisa 1000+, ao anatin'izany ny minisitry ny fizahan-tany avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, mba hametraka ny dingana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fizahantany, ny fampiasam-bola ary ny hetsika.
Saika mivoaka i Saudi Arabia, ary toy ny aseho matetika mandritra ny krizy COVID-19, ny minisitry ny fizahan-tany ho an'ny fanjakana HE Ahmed Al-Khateeb dia nanisy fotoana fizahan-tany nandritra ny adihevitra. Nanasa mpitarika mpizahatany 1000+ avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina izy hanatrika ny hetsika FII ho avy any Riyadh.
Raha ny fenitra rehetra, ny FII dia nivadika ho fifanakalozan-kevitra "Invest in Humanity" ho lasa mpanaingo feno hetsika ho an'ny fanarenana ny fizahan-tany sy fizahan-tany manerantany.
Tamin'ny 26 Mey 2021, io minisitry ny fizahantany Saodiana io ihany no naneho ny fahitany ny fizahan-tany manerantany, fony izy nampiantrano ny Vovonana Famerenana ny fizahan-tany nataon'ny World Tourism Organization (UNWTO)
6 volana taty aoriana dia hita fa Zurab Pololikashvili, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO dia mahita ny FII any Riyadh ho fifaninanana iray ary niantso ny Kongresin'ny fizahan-tany eran-tany UNWTO any Barcelona izay mifanipaka mivantana amin'ireo daty nofaritan'ny FII tany Riyadh.
Thtetika iray ihany no nampiasaina rehefa nikarakara fivoriana manan-danja tamin'izany fotoana izany ny UNWTO Ny WTTC dia nanao ny fihaonambe manerantany tamin'ny volana Mey tany Cancun, Mexico.
UNWTO dia mitondra zaza
eTurboNews nanontany tamin'ny volana aprily raha natao mba tsy hahombiazan'ny Vovonana WTTC? Mikasa ny hifaninana amin'ny tetikasan'i Saudi Arabia ve ny UNWTO? Fanambarana iray eto an-tany no hiteny hoe: UNWTO dia mihetsika toy ny zaza.
Solontena sy minisitra UNWTO iray izay nasaina ho any Barcelona sahady no nilaza izany eTurboNews handeha ho any Saudi Arabia izy.
Inona ny Initiative Investment Future (FII)?
Ny Future Investment Initiative (FII) dia sehatra iraisampirenena ho an'ny adihevitra notarihin'ny manam-pahaizana teo amin'ny mpitondra, mpampiasa vola ary mpanavao manerantany miaraka amin'ny fahefana hamolavola ny ho avin'ny fampiasam-bola manerantany. Ny fifantohana dia ny fampiasana fampiasam-bola hampiasana ny fitomboan'ny fahafaha-mitombo, ahafahan'ny fanavaozana sy ny teknolojia manakorontana, ary ny fiatrehana ireo fanamby manerantany.
Ny FII Institute dia mifantoka amin'ny sehatra dimy:
Amin'ny alàlan'ny fitarihana ny ezaka sy ny enti-miasa amin'ireo sehatra ireo dia mino ny FII fa afaka miteraka fiatraikany tsara amin'ny zanak'olombelona izy ireo.
Mieritrereta, XCHANGE, ACT
FII Institute dia miorina amin'ny andry telo - THINK, XCHANGE, ACT - amin'ny alalànay no anohizantsika ny tanjontsika avy amin'ny fototra mafy ESG. Ny andry THINK dia manome hery ny saina mamiratra indrindra eto an-tany hamantatra ny làlana tsara indrindra mankany amin'ny ho avy mamiratra.
Ny andry XCHANGE dia mamorona sehatra iarahan'ny manampahaizana, mpanavao, mpitarika ary mpampiasa vola mizara fahalalana sy miara-miasa mankany amin'ny fanovana. Ary farany, ny andrin'ny ACT dia mitady sy manangona vola amin'ny haitao vaovao manome toky ny vahaolana eran'izao tontolo izao.
Ny fanavahana iray hafa ao amin'ny FII Institute dia ny fiziriziriana amin'ny fitsipiky ny ESG tsy miangatra sy mampiditra ny lalana ho amin'ny fitohizan'ny tontolo sy ho avy mamiratra. Izahay dia mikendry ny hampitombo ny fahatsiarovan-tena momba sy hanatsara ny fampiharana ny fenitra ESG ary hanome toky fa hitantana am-pahibemaso ny hetsika ara-tontolo iainana, ara-tsosialy ary fitantanana mba hanaraka ireo fitsipika ireo.
Ny fanavakavahana fototra an'ny FII Institute miaraka amina hetsika hafa mitovy amin'izany amin'ny hetsika. Ny FII dia mitaky ezaka lavitra noho ny mahazatra amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny vahaolana tena izy amin'ny ho avy.
Fantatra fa be vava ny FII amin'ny fiantsoana ny vondrom-piarahamonina manerantany mba handray andraikitra, mamorona sehatra misy ny hevitra, ary avy eo miantoka ny fampiasam-bola hahatonga azy ireo ho tena zava-misy.
Raha fintinina, ny iraka ataon'ny FII Institute dia ny handamina sy hamela ny hevitra hamaha ireo fanamby maika indrindra manerantany amin'ny alàlan'ny teknolojia mandroso sy maharitra.
Ny hetsika Fampiasam-bola ho an'ny Humanity ho avy dia notanisaina fizarana fizahan-tany roa manokana:
Karatra paositra amin'ny ho avy, fampiasam-bola amin'ny fizahan-tany maharitra.
Fitsangatsanganana amin'ny raharaham-barotra sy fialamboly ho an'ny tontolo maharitra.
Amin'ny fanampiana 1000+ mpitarika fizahan-tany amin'ny adihevitra FII, ny indostrian'ny fizahantany dia manana tambajotra sy efitrano fandraisam-bahiny ho an'ny mpitarika hiaraka tsy misy hetsika hafa hatramin'ny nisian'ny valanaretina.
Ny biraon'ny mpitantana ny FII:
HE Yasir Al-Rumayyan
Governora PIF, filoha Saudi Arabia Aramco Saudi Arabia
Andriambavy Reema Bint Bandar
Masoivohon'i KSA any Etazonia Arabia Saodita
Senatera HE Matteo Renzi
Senatera italianina ho an'i Florence sy ny praiminisitra italiana teo aloha
HE Mohamed Al Abbar
Mpanorina & Tale Mpitantana EMAAR manana Emirà Arabo Mitambatra
Mpanorina X-Prize Foundation & Singularity University USA
Profesora Tony Chan
Filohan'ny oniversite siansa sy teknolojia King Abdullah (KAUST)
Chemistry ny pharmaceutique pharmaceutika, University of California (UCSD) Arabia Saodita
Sidina New Guyana mankany Barbados amin'ny InterCaribbean
Nahazo fandresena lehibe i Harley-Davidson
Nosakanan'ny Fitsarana amerikanina an'ny...
Ny LATAM Airlines Group izao dia mametraka ny drafitry ny fanavaozana...
Tsy faly tamin'ny fanavaozana ny marika ny mpanorina ny Pizza Papa John
Afaka mamandrika fitiliana PCR ao amin'ny hotely any Jamaika izao ny Kanadiana...
Ny lalàna vaovaon'ny Vondrona Eoropeana dia mandràra ny mpitsidika tsy vita vaksiny ...
Ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena dia mamerina dingana lehibe amin'ny...
Avy aiza ny 90 isan-jaton'ny fandripahana ala maneran-tany
Vaksina COVID ho an'ny ankizy maika hoy ny dokotera ER
Mampiroborobo ny tanjona ny fizahan-tany Seychelles sy Club Med ...
Tel Aviv dia nomena ny tanàna vaovao lafo indrindra eran-tany honenana...